Isofa vs indwangu usofa
Abantu bavame ukucabanga ngale mibuzo lapho bethenga usofa omusha wendlu yakho, yisiphi isitayela esikhanga kakhudlwana, yini impahla ihlala isikhathi eside, lesikhumba noma lendwangu usofa yikuphi okungcono? Empeleni, ziningi izinto ezibhekwayo ukuthi ngabe isabelomali, induduzo, isitayela, njll ngemuva kwakho konke kungenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu empilweni yakho. Ngokuya ngesofa lesikhumba vs lendwangu, kuzonqunywa ukuthi uhlala kanjani nokuthi yini oyiphilayo. Ngakho-ke, sibhala amaphuzu angezansi ongabhekisa kuwo ukuze uthenge usofa ofanele wendlu yakho.
Yini okufanele uyicabangele lapho uthenga usofa wesikhumba nendwangu
Uma kukhulunywa ngenduduzo kuncike kakhulu ekuzizweni komuntu siqu. Ngakho-ke okwenzayo kuphela ukuzibuza, yimuphi ozizwa ungcono emzimbeni wakho?
Umuzwa ojwayelekile ukuthi indwangu ithokomele kakhulu kunesikhumba cuz ukuthi ithambile, ithambekele ngokwengeziwe, kanye nokuphendula okuncane kokushisa emazingeni egumbi. Kepha kuya ngendwangu yendwangu nohlelo lokusekela futhi. Ngenjwayelo, izindwangu zosofa ziphefumula ngaphezu kosofa besikhumba. Noma ungahlala isikhathi eside, izinqe zakho azishisi kangako, kunomswakama futhi kugcwele, okwenza abantu bazizwe bekhululeke kakhudlwana futhi kunciphise ukucasuka. Noma kunjalo, into eyodwa kufanele inakekelwe, ukuthi ezinye izindwangu ezishibhile zizoxega bese zakha ukuhlangana kumakhushini.
Ngokuqondene nosofa wesikhumba, kuvame ukuthonywa isimo sezulu. Ebusika, usofa wesikhumba ungabanda kakhulu ukuthinta noma indawo, kodwa inqobo nje uma uthatha ingubo kuyofudumala kusondele ekushiseni komzimba womuntu. Ehlobo, noma ngabe awunakho ukufakwa kwesifutho somoya, usofa wesikhumba upholile kunendwangu okudala ukuthi ujuluke unamathele esikhunjeni. Impela, sincoma ukufaka isimo esilawula isimo sezulu, okuletha induduzo enkulu esimweni sezulu esishisayo.
Empikiswaneni yezindleko zesikhumba vs.. izindwangu zosofa, uma laba bobabili besitayela esifanayo, eyenziwe ngefreyimu yekhwalithi efanayo, isikhumba siyabiza kakhulu ngokujwayelekile.
Ngiseshe usofa nendwangu womabili eWayfair, imiphumela yangaphambili ikhombisa umehluko wabo. Isikhumba siphezulu kakhulu kunendwangu. Kepha, kukhona nezindwangu zikanokusho ezenziwe ngabadwebi abadumile ezeqa izindleko zale mibhede yesikhumba. Kukhona futhi osofa bamabanga aphansi besikhumba abashibhile kunendwangu uma ungathathi induduzo nokubukeka. Intengo ivamise ukukhombisa ikhwalithi nempilo kasofa, ngakho-ke akungabazeki ukuthi isikhumba sihlala isikhathi eside kunendwangu uma singonakalanga esikhwameni.
Ngakho-ke, okokuqala okufanele ukubheke yisabelomali, ke ukuhlobisa indlu, isakhiwo somndeni. Konga kakhulu ukukhetha usofa wendwangu ongonga izindleko zesigamu. Osofa besikhumba bafaneleka kakhulu kubantu abanezimo ezinhle zezezimali noma amakamelo okwamukela ukuze bathenge. Ngenkathi osofa bezindwangu befaneleka kakhulu imindeni eningi noma ngabe izitayela eziningi noma amanani entengo aguqukayo.
Indwangu nesofa lesofa zombili zinesitayela esibanzi samaphethini nemibala ongayikhetha, okufanele ifaniswe negumbi lonke.
Ngenjwayelo, izindwangu zosofa zinikeza ukukhetha okuningi kunesikhumba ngenxa yamaphethini wazo ahehayo, imibala, bobunjwa, namasu okuphenya. Uma kuphela ucabanga ukubeka usofa wendwangu lapho uhlobisa indlu yakho akukho okufanele ukunakekele, cuz ungathola noma yisiphi isitayela nombala ozohlangana negumbi. Sekuyinto yokuqala engakhethwa ngabantu abaningi, emelwe osaziwayo bendwangu baseMelika abasizakala kusakhiwo sabo esiqinile, izinto eziyinkimbinkimbi, ukwakheka kwesayensi, ubuhlakani obuhle nenduduzo ebanzi.
Ngokuphambene nalokho, zimbalwa izindlu zokuhlobisa ezikwazi ukufanisa usofa wesikhumba osezingeni eliphakeme kakhulu. Uma ingalingani egumbini, umthelela oyindida ungathunyelwa. Impela uma ifaniswe kahle ingakhombisa ubuhle obuyingqayizivele egumbini okunzima ukuliphinda endwangwini. Okujwayelekile kakhulu kwesikhumba isitayela se-chesterfield okuyindabuko kakhulu. Noma kunjalo, njengomthetho, osofa besikhumba ngokujwayelekile banemfashini ukwedlula ozakwabo bendwangu. Uma ukhetha ukuba nokubukeka kwesimanje noma kwanamuhla, ithambekele ekubonakaleni okubushelelezi nangaphezulu kakhulu kunamasofa amaningi endwangu.
Noma ngabe usofa wesikhumba noma wendwangu bonke banikela ngobuhle nobuchwepheshe endlini yakho, ikamelo lakho lokulala, igumbi lakho lokudlela, noma igumbi lakho lokuphumula. Ngakho-ke, kubheka ukukhetha komuntu siqu. Ngabe ufuna ukuthi usofa wakho ube yinto eyinhloko yokwakha egumbini lakho lokuphumula? Yisiphi isitayela somhlobiso osithandayo, ukuvuna noma kwesimanje? Ngabe unethemba lokuthi kunalokho kube lula endlini yakho? Yilokho kuphela esizocubungula lapho sikhetha osofa.
Ngaphandle kwenduduzo, izindleko nesitayela, ukunakekelwa kungaba yinto esemqoka yokungabaza. Isikhumba kulula kakhulu ukusihlanza futhi sibiza isikhathi esincane, kanti indwangu idinga ukukhishwa futhi ihlanzwe njalo. Usofa wesikhumba ungahlala amashumi eminyaka uma unakekelwa kahle. Noma kunjalo, ngenkathi kufanele kulungiswe ngokungaguquguquki ukuvimbela imifantu nokuqhekeka.
Ngenxa yesici esingenamanzi, okwenzayo ukumanzisa ngokuphelele ithawula emanzini ahlanzekile, ulisonge bese usula ubuso besofa. Noma kunjalo, uma kulondolozwa isikhathi eside kudinga ukuthanjiswa nokugcotshwa okukhethekile. Ngaphezu kwalokho, uma usofa wesikhumba usulimele ngokomzimba, ikhava engaphandle ayinakushintshwa, okunzima kakhulu ukusingatha. Ngaphandle kwalokho, ezinye izilwane ezifana nekati zijwayele ukuzika usofa uzipho. Uma kwenzeka umonakalo, pakisha isofa noma thenga amathoyizi ukuze ikati liphazamise. Kumele kuqashelwe ukuthi osofa besikhumba kunzima ukubanakekela futhi imihuzuko kunzima ukuyilungisa, ngakho-ke uma unezingane noma izilwane ezifuywayo ekhaya, izindwangu zosofa zifaneleka ngokwengeziwe.
Ngokuqondene nendwangu, kungcono kunalokho kulula futhi kulula ukuyinakekela. Iningi lesethi yendwangu kasofa lingasuswa futhi ligezwe. Uma ucabanga ukuthi kuyinkinga ukubhekana nalokhu kufakwa okungcolile, ungayisusa bese uyithumela endaweni yokuhlanza eyomile. Uma ukhathazekile ngokushisa vele ubeke uhlaka lapho kufika ihlobo bese ulifaka esikhundleni salo ngephedi efudumele ebusika. Noma kunjalo, osofa abasendwangu bazoya ephilisi futhi bagqoke okuncane ngokusetshenziswa njalo, ngakho-ke ukukhetha usofa osezingeni eliphezulu kunganciphisa ubungozi.
Indwangu usofa ngokuvamile yakhiwa kasilika, u-satin, Hemp, i-corduroy nezinye izinto ezingamelana nokugqoka. I-Per inezici zayo. Amasofa kasilika nosayizi we-satin adlulisa ubuhle nobukhazikhazi, enikeza abantu umuzwa omangalisayo. Noma kunjalo, osofa be-hemp kanye ne-corduroy babukeka besinda futhi bakudala, futhi kubonakala sengathi yakha isitayela semvelo nesilula.
Okukhethwa kukho okokusebenza kosofa besikhumba kukhulu, futhi. Izikhumba ezihlukile ziveza imiphumela ehluke ngokuphelele. Izici zosofa besikhumba zigxile kuzo, ukuqina kwemvelo, ukuqina kwesikhumba senkomo, ubuso obucayi, ukushesha kombala okuphezulu, ukuqina okuhle, ukuvunyelwa komoya, namandla aphezulu emishini. Okugqame kakhulu amandla alo aphezulu wezinyembezi namandla okuqina okwenza ngcono usofa isikhathi sokuphila. Zivame ukuhlukaniswa ngezinhlobo ezimbili, isikhumba esincane noma esijiyile. Idizayini yosofa omncane wesikhumba imele isitayela esilula futhi esikhanyayo.
Osofa besikhumba abasezingeni eliphakeme bathambile ukuwathinta, ukuhlala kahle, kufudumele ebusika futhi kuphole ehlobo. Ngenxa yokuthungwa okungcono, intengo ibiza kakhulu kunendwangu. Kunezinhlobo eziningi zosofa bendwangu bonke abanikeza abantu imizwa ehlukile. Amasofa enziwe ngezindwangu zikasilika ahlala edlulisela kubantu umuzwa omuhle, namasofa enziwe nge-hemp alula ngokwengeziwe. Ngokombono wezinto ezibonakalayo, osofa besikhumba bahlala isikhathi eside.
Kukhona iqiniso lokuthi besivame ukungakunaki ukuthi osofa besikhumba empeleni yi-hypoallergenic. Uma othile ene-allergies yemvelo, lapho-ke lokhu kungasizi ngalutho noma ngabe kusofa kangakanani. Ngokungafani nosofa wendwangu, osofa besikhumba babamba izibungu ezimbalwa zothuli, i-pet dander, nezinye izifo, okungadala ukungezwani komzimba. Ngakho, qhathanisa nosofa wendwangu unikeze umbhede ofudumele we-allergen uneasy ukusula usofa wesikhumba kubonakala kuyindlela engcono. Impela, akunakwenzeka ukugcina usofa wendwangu ungenawo amagciwane, kodwa kuzobiza isikhathi esiningi futhi kuthathe umzamo omkhulu kunombhede wesikhumba ngendlela ende
Nayi eminye imibuzo ewusizo ongazibuza yona lapho uthenga indwangu noma usofa wesikhumba:
Ingabe unazo izilwane ezifuywayo? Ingabe ezifuywayo zakho izingane zakho? Imvamisa sincoma indwangu yabanikazi bezilwane ngoba bangaklwebha isikhumba esibizayo ngokukhasa kwabo. Noma kunjalo, uma ungumqeqeshi ohlakaniphile ezifuyweni, khona-ke zombili zilungile.
Ingabe unazo izingane? Ngabe bathambekele ezingozini zabo bonke imivimbo? Ngabe bavame ukudlala kusofa? Uma konke yebo, ngethembe, isikhumba singakusiza ukuqhathanisa isikhathi eside nendwangu. Ngenkathi cishe ingekho indlela yokugwema ubushiqela bezingane, uhlelo lokulawula umonakalo luyadingeka.
Isofa lakho lizoba umngane wesikhathi eside odinga ukukhombisa isitayela sakho esishintshayo futhi uphathe izidingo zakho zokuphumula. Yize ukhetha indwangu vs.. usofa wesikhumba (noma okuphambene nalokho) kungabonakala njengokukhetha okuhle, kuzothonya impilo ende yengcezu ekhaya lakho. Into enhle sinokukhetha okuningi esandleni.
Ungahlola kanjani lapho uthenga usofa wesikhumba nendwangu
1. Bheka okokufaka kwangaphandle okufanele kube kuqinile ngokwanele. Qiniseka ukuthi ayikho imibimbi namafolda angathandeki ukuthonya ukubukeka.
2. Ingaphezulu lesofa kufanele libe yisicaba, kungekho zingwegwe, izipikili eziphumayo, noma ukudla okuyisisekelo, okuzolimaza abantu nezingubo ezidabukile.
3. Uma uthinta insimbi noma ifreyimu yokhuni, usazizwa i-engeli ekhona okusho ukuthi ikhava le-lining kulula ukugqokwa ngesikhathi esifushane, ikakhulukazi eduze nendawo yokuhlala.
4. Bheka ukuthi amaphethini afaniswe kahle yini, nemithungo esetshenziselwa ukuhlobisa ihlukaniswe ngokulinganayo.
5. Isigqiki akufanele simiswe emaphethelweni esihlalo. Ukuxhumana kufanele kube mncane ngangokunokwenzeka phakathi komcamelo, izingalo zokubamba izingalo, ukubuyela emuva, nosofa.
6. Hlola ukuthi izihlalo zezingalo nemilenze yosofa zizinzile yini, indawo yokhuni iyashelela. Umcamelo kufanele ube nokusekelwa okwanele futhi uhambisane nosofa emuva.
7. Isofa lesikhumba imvamisa linokuphazamiseka okuthile okungabonakali kwe-chromatic, ngisho namabala amancane, ngakho-ke naka imibala yesikhumba ezungeze yonke indawo.
Indwangu Ephakeme Nezinhlobo Zesikhumba
Iningi labathengi kungenzeka lingafundi izinhlobo zendwangu yokwenyuka nesikhumba okusiza nokukhetha indwangu noma isikhumba. Izinhlobo zendwangu yokupholisa kungaba yimicu yemvelo noma imicu eyenziwe ngabantu. Nayi isingeniso esifushane semicu yendwangu ozoyithola lapho ubhekene nezinketho zezindwangu ezahlukahlukene.
Imicu yemvelo yizinto eziqhubekayo ze-filament ezithathwe ezitshalweni noma ezilwaneni. Zivame ukuthamba, yinhle ukuhlobisa futhi kumnandi, ukhululekile ukuthinta. Kunezintambo ezine zemvelo njengezici ezingezansi.
Gcina ukushisa nokufudumala; Luhlala Isikhathi Eside, isisindo kunezinye izindwangu; Umbimbi nokumelana namabala; Gqoka umbala kalula, fade ukumelana; Elwa namagciwane, imelana nephunga
Ubuso bushelelezi, ithambile kodwa ayisheleli; Ukunakekelwa kwesikhumba nezinwele ngenxa ye-albhamuen yemvelo yeselula; Idayi futhi iphrinta kahle; Kubuthakathaka ukujuluka, ilanga, insipho; Imelana nenhlabathi, isikhutha, namabhu; Idinga ukunakekelwa okukhethekile, ukuhlanza okomile
Iyanethezeka futhi iyaphefumula; Imicu yemvelo engenawo amakhemikhali.; I-Hypoallergenic futhi ayicasuli isikhumba.; Iyavuseleleka futhi iyabola.; Ukuwashwa kwemishini.; Ithambekele ekunciphiseni nasemibimbi kakhulu.; Imicu yemvelo iguga ngokushesha
I-fiber yemvelo enokungcola kwemvelo okuphansi; Labour-olunzulu ukwenza; Ngokwemvelo, ukuxosha izinambuzane; Imunca umswakama kahle - kuze kufike 20% yesisindo sayo; Ukuphola okungajwayelekile nokusha esimweni sezulu esishisayo nesinomswakama; I-Hypoallergenic, ilungele isikhumba esibucayi noma ukungezwani komzimba; Ethintwe yisikhunta nomjuluko; Kunzima ukususa ama-creases
Umuntu wenza imicu
I-fiber eyenziwe ngomuntu yenziwa ngabantu ngokuhlanganiswa kwamakhemikhali, ngokungafani nemicu yemvelo etholakala ngqo ezintweni eziphilayo. Kubandakanya inayiloni, i-polyester, i-acrylic, polyolefin vinyl, njll. Nazi izici zalezi zinhlobo zemicu eyenziwe ngabantu.
Imelana nokwelula nokuncipha; Iyagezeka noma yomile; Ukunakekelwa okulula njengoba kumelana nemibimbi, ukubuna.; Ukumelana namakhemikhali amaningi; Ngeke isikhutha noma ukumunca amanzi; Izinkinga ezi-static nezokukhokha; Amabala kawoyela kunzima ukuwasusa; Okungeyona imvelo
Ikhishwe ekuncibilikisweni kwepeleti lepulasitiki, evutha kakhulu; Amandla aqine kakhulu; Luhlala Isikhathi Eside, ukumelana namabala; Inqwaba enhle nekhava; Iphethe umbala wayo ; Izindawo ezingekho emthethweni zokuhlanganisa, kunzima ukupenda; Izinto zokwakha zingakhombisa ukuwohloka
Esilula, ithambile, futhi kufudumele, isandla esifana noboya; Ingalingisa eminye imicu, njengekotini; Idayi yemibala ekhanyayo; Okungeyona i-allergenic; Imelana namabhu, uwoyela, amakhemikhali, ukukhanya kwelanga; Idonsa umswakama kude nomzimba futhi iyagezeka; Unenkinga yokukhokha kanye nokuhuzuka
Iqinile kepha inesisindo esingaphansi kwanoma iyiphi enye ifayibha esetshenziswa kakhulu; Izinto eziningi ezinwebekayo ; Okumunca umswakama kakhulu, uyaphefumula.; Kumelana kakhulu nokuhuzuka, isikhunta, isikhutha nombimbi; Kugezwa kalula, futhi amelana nokuchitheka kukawoyela.; Kuthintwe ukukhanya kwelanga futhi, ophuzi ngeminyaka; Ukumelana nowoyela namakhemikhali amaningi; ukushisa okuphansi nephuzu lokuncibilika
Idayi kalula futhi ikhiqiza imibala ecacile
Kwethulwe ukufana nosilika, uboya, noma ukotini
Ubushelelezi, okuhlala isikhathi eside futhi okungabizi
Azikho izinkinga ezimile noma zokukhokha
Imvamisa isetshenziswa emixubeni
Imibimbi kalula ngaphandle kokuthi kuphathwe i-esp igeziwe
Iyakwazi ukumunca umswakama, amafutha omzimba, namanzi
Isesekeli esisebenzayo sokusebenzisa ngenkathi ebandayo
Ukusebenza okuhle okungangenwa ngamanzi
Ihlanganiswa nezitayela zemihlobiso ehlukile
Ithambile futhi inokubukeka okunethezeka
Gqoka ngokushesha ngokusetshenziswa
Okumunca uthuli kakhulu
Isikhumba nendwangu yendwangu - ingxube ephelele yanoma isiphi isitayela
Phezu kokunikeza iziphakamiso eziningi kangaka, Ngicabanga ukuthi othile usazizwa engabaza ukunquma ukuthi ikuphi okungcono ukufuna isikhumba noma indwangu. Lapha sizokhombisa omunye umqondo omuhle wokuba nakho kokubili ekamelweni lakho futhi sihlanganise isikhumba esihle nesofa lendwangu elizohambisana nengaphakathi lakho ngendlela enhle kakhulu.
Kokubili isikhumba nendwangu yendwangu exutshwe nezinto zangaphakathi ze-rustic nezaseMedithera, Ihlanganisa ukuthungwa okucebile nokubushelelezi, imibala engathathi hlangothi nomuzwa wemfudumalo. Isofa lesikhumba luhlobo lwefenisha yakudala ebilokhu ixhunywe nokunethezeka nokuvuna. Indwangu yokwakhiwa, Ngokwesinye isandla, idlulisa induduzo evamile, imfudumalo nomuzwa wasekhaya. Kanye ukuwahlanganisa ezintweni zangaphakathi ze-rustic, entofontofo yesofa nendwangu izobonisa ukubukeka okumangazayo okubonakala kwamukela izivakashi ezizovakashela. Imicamelo ethambile ngamathoni athulisiwe iyisengezo esihle kusofa. Amaphethini wezimbali futhi ahlotshisiwe kasofa akhipha enye intelezi ekhangayo kumhlobiso wangaphakathi. Cabanga nje ukuthi uhleli ngasemlilweni futhi ujabulele ukuqhekeka kwezinkuni nokudansa kwamalangabi. Ngeke yini kube kuhle kakhulu futhi kube nokuthula okukhulu kwangaphakathi?
Isofa nendwangu usofa, yize bekujwayelekile emiklamweni yendabuko ethe xaxa, sithole isikhundla sazo esifanele ezindlini zanamuhla. Imigqa evundlile neqondile, imibala ehambisanayo neqhathanisayo iqokomisa ukwakheka kwanamuhla okuyingqayizivele, okuwumbono ojwayelekile wosofa bangaleso sikhathi. Iphalethi lemibala ligxile kokumnyama okudala, amhlophe qwa, okuluhlaza okwesibhakabha Okumnyama, noma inhlanganisela yalezi zingqimba zombala, kanye nemfashini umbala ompunga. Okumpunga kubukeka kuhlanganiswe kahle ngokulingana nomnyama noma omhlophe. Ukuhlanganiswa kwesikhumba nendwangu kunikeza ukunethezeka nesitayela sokugcina kodwa akumangazi nakancane. Amasofa amahle wesigaba noma osofa bamakhona kukhona indawo yokuhlala yezivakashi zakho nomndeni wakho, ezihlangana kalula ezintweni zangaphakathi zesimanje nezincane. Imicamelo yokuhlobisa ivame ukufaka umbala owodwa oyisisekelo noma imibala embalwa yombala owodwa ngaphandle kwamaphethini wokuhlobisa. Usofa wesikhumba nendwangu onomklamo wanamuhla wenzelwe ukuba kube yindawo ephambili egumbini nocezu lokuxoxa. Ukulungiswa kwe-Modular kunikeza ukuguquguquka kokuhlela kabusha izihlalo ngokwesidingo sakho nalokho okuthandayo.
Usofa uyindawo ebalulekile ekamelweni lonke lapho ususa khona ukukhathazeka, izimo ezikhathele nezimbi. Yindawo eyenzeka ngezinto ezithokozisayo nezifudumele nsuku zonke. Ngiyakholelwa ukuthi kunzima ukukhetha usofa wesikhumba noma wendwangu ezinkulungwaneni zamamodeli. Noma kunjalo, impendulo ayinasiqiniseko sokuthi yikuphi okungcono futhi kukuwe nomndeni wakho. Inqobo nje uma ihlangabezana nezidingo zakho futhi ivumelane nokuhlobisa indlu, lokho kuzoba yinto emnandi ukuyikhetha.
Article Isiqephu esedlule
Isiqephu esilandelayo →
Izinzuzo zombhede wesimanje osebenza kabanzi
Amathegi: Thenga usofa usethi
Isikhathi sokubhala: 2020-11-27